ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး ပြစ်မှားရင် ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဘယ်လို တောင်းပန်ရမလဲ? - သတင်းရွာ
( ၄ ) ရဟန္တာ အရှင်မြတ်များတို့ အပေါ်၌ လည်ကောင်း ၊
( ၅ ) ပစ္စုပ္ပန်၌ တော်စပ်သော မိခင်ကြီးနှင့် သံသရာ၌ တော်စပ်ခဲ့သော မိခင်များအပေါ်၌ လည်းကောင်း ၊
( ၇ ) တရား အသိထူးရအောင် ဟောပြောပေးကြသော လောကုတ္တရာ ဆရာသမားများ အပေါ်၌လည်းကောင်း ၊
ဤကုသိုလ် စေတနာကြောင့် ဆိုးကျိုးပေးဆဲ ၊ ဆိုးကျိုး ပေးလတ္တံ့သော အကုသိုလ်မှန်သမျှ အနန္တတို့သည် ပိန်ကြာ ဖက်တွင် ရေမတင် လျှောကျဘိသကဲသို့ ကင်းစင်လွင့်ပျောက် မထိရောက်တော့ဘဲ ကောင်းကျိုးအနန္တ ဖြစ်ထွန်းရပါလို၏ မြတ်စွာဘုရား။
စီးပွားရေး ပျက်ဆီးခြင်း၊ တရားအားထုတ်ပေမယ့် တရားရခါ နီးမှာ အထိတ်တလန့်ဖြစ်၍ ရင်တမောမော ဖြစ်နေပြီးတရား မရဘဲ ဖြစ်နေတတ်တယ် ။
မဂ်တား ၊ ဖိုလ်တား ၊ အန္တရယ်မှန်သမျှ ကင်းဝေးစေရန် စိတ်သန်၍ နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်ခြင်း တရားအား ထုတ်ခါနီး ရွတ်ဖတ်ခြင်းကြောင့် တစ်ပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ အန္တရာယ်ပြုခြင်းမှ ကင်းဝေးစေကြောင်း မေတ္တာလောင်း၍ ရှေ့အရိယာသူတော်တို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
“သောကခပ်သိမ်း ငြိမ်းအေးကြပါစေ… မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်တိုင်းကို ကုသိုလ်များဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ”…
ခငျပှနျးကွီးဆယျပါး ပွဈမှားရငျ ဘာတှေ ဖွဈမလဲ ဘယျလို တောငျးပနျရမလဲ?
( ၄ ) ရဟန်တာ အရှငျမွတျမြားတို့ အပျေါ၌ လညျကောငျး ၊
( ၅ ) ပစ်စုပ်ပနျ၌ တျောစပျသော မိခငျကွီးနှငျ့ သံသရာ၌ တျောစပျခဲ့သော မိခငျမြားအပျေါ၌ လညျးကောငျး ၊
( ၇ ) တရား အသိထူးရအောငျ ဟောပွောပေးကွသော လောကုတ်တရာ ဆရာသမားမြား အပျေါ၌လညျးကောငျး ၊
ဤကုသိုလျ စတေနာကွောငျ့ ဆိုးကြိုးပေးဆဲ ၊ ဆိုးကြိုး ပေးလတ်တံ့သော အကုသိုလျမှနျသမြှ အနန်တတို့သညျ ပိနျကွာ ဖကျတှငျ ရမေတငျ လြှောကဘြိသကဲသို့ ကငျးစငျလှငျ့ပြောကျ မထိရောကျတော့ဘဲ ကောငျးကြိုးအနန်တ ဖွဈထှနျးရပါလို၏ မွတျစှာဘုရား။
စီးပှားရေး ပကျြဆီးခွငျး၊ တရားအားထုတျပမေယျ့ တရားရခါ နီးမှာ အထိတျတလနျ့ဖွဈ၍ ရငျတမောမော ဖွဈနပွေီးတရား မရဘဲ ဖွဈနတေတျတယျ ။
မဂျတား ၊ ဖိုလျတား ၊ အန်တရယျမှနျသမြှ ကငျးဝေးစရေနျ စိတျသနျ၍ နစေ့ဉျရှတျဖတျခွငျး တရားအား ထုတျခါနီး ရှတျဖတျခွငျးကွောငျ့ တဈပါးသောပုဂ်ဂိုလျတို့ အန်တရာယျပွုခွငျးမှ ကငျးဝေးစကွေောငျး မတ်ေတာလောငျး၍ ရှအေ့ရိယာသူတျောတို့ မိနျ့တျောမူခဲ့ပါသညျ။
“သောကခပျသိမျး ငွိမျးအေးကွပါစေ… မင်ျဂလာရှိသော နရေ့ကျတိုငျးကို ကုသိုလျမြားဖွငျ့ ဖွတျသနျးနိုငျကွပါစေ”…